Dowladda Puntland oo go'aan cusub kasoo saartay Isticmaalka Lacagta Duuga ah | SAHAN ONLINE
Dowladda Puntland oo go’aan cusub kasoo saartay Isticmaalka Lacagta Duuga ah
GAROOWE – Gollaha Wasiirada Puntland oo uu Shir guddoominayey Madaxweyne Kuxigeenka Puntland Cabdixakiin Camey ayaa looga dooday dhibaatada ka taagan Shillinka Soomaaliga ee Suuqyada magaalooyinka waaweyn ee Puntland.
Gollaha Wasiirada Puntland ayaa ugu dambeyntii go’aan kasoo saaray lacagta la qaadanayo iyo midda aan la qaadanayn,waxayna sheegeen in Puntland laga ogolyahay oo keliya Isticmaalka lacagta tayada leh,waxayna mamnuucday Isticmaalka lacagta duuga ee Shiling Soomaaliga ah.
Gollaha xukuumadda dowladda Puntland ayaa maanta (shalay) soo saaray go’aamo ku aadan lacagta shilling Soomaaliga ah ee laga isticmaalayo Puntland waxayna golluhu sheegeen in Puntland laga oggol yahay lacagta tayada leh ee isticmaalka ku jirta, islamarkaana laga mamnuucay Puntland isticmaalka lacagta been abuurka ah, midda aan tayada lahayn ee duugga ah” ayaa lagu yiri warsaxafadeedkii ka soo baxay shirkii gollaha wasiiradda ee maalintii shalay ka dhacay caasimadda Garoowe.
Muddooyinkii u dambeeyey ganacsatada iyo dadweynaha Puntland ayaa ka cabanayey lacag dug ah oo soo buux dhaafisay suuqyadda,taasi oo ganacsatadu ay diideen inay qaataan oo Isticmaalaan.
Waxaa kaloo lacagtaas diiday inay cashuur ahaa u qaataan dowladaha hoose iyo Waaxda Cashuuraha beriga ee Wasaaradda Maaliyadda Puntland.
Bangiga Garoowe keliya ,waxaa xiligan taala 10-milyan oo shilling Soomaali duug ah ,taasoo ah mid ay qabteen ciidamada ilaalada Kontoroolada Puntland.
Lacagtan ayaa laga keenay gobolada Koonfureed ee dalka,iyadoona la doonayey in lasoo geliyo suuqyadda,mana cadda sida laga yeeli doono lacagtaas oo haatan u muuqata in gebi ahaanba laga diiday suuqyada Puntland.
Go’aanka gollaha Wasiirada Puntland ayaa dhiirigelinaya oo keliya in bulshadu Isticmaasho lacagta shilling-ka cad cad ee sida weyn looga Isticmaalo gudaha Puntland iyo lacago kale oo lagu sheegay inay tahay mid gaduudan oo tayadeedu sarayso.